नेपालमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच ६३. ३१ प्रतिशत, मोबाईल ब्रोडब्याण्ड एक्लै ४९.६५ प्रतिशत - Technology Khabar
टेक्नोलोजी खबर २५ असार २०७६, बुधबार २०:१९
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको बैशाख सम्मको एमआईएस रिपोर्टअनुसार नेपालमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच ६३. ३१ प्रतिशत पुगेको छ ।
जसमध्ये मोबाईल ब्रोडब्याण्डको पहुँच मात्रै ४९.६५ प्रतिशत पुगेको छ ।अर्थात करिब आधा जनसंख्याले मोबाईल ब्रोडब्याण्ड प्रयोग गर्ने गर्दछ । बैशाख मसान्तसम्म नेपालमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ८६ लाख ८५ हजार ८ सय ७३ पुगेको छ ।
जसमध्ये नेपाल टेलिकमका मात्रै ८८ लाख ७८ हजार १ सय ९४ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेका छन भने अर्को ठुलो सेवाप्रदायक एनसेलका ६७ लाख ४१ हजार ७ सय ४९ प्रयोगकर्ता पुगेका छन् ।
नेपाल टेलिकम अन्य सेवामा अरु सेवा प्रदायक भन्दा अगाडी रहे फोरजी सेवा बिस्तारमा भने पछि परेको छ । एनसेलले फोरजी सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या २६ लाख ७५ हजार १ सय १४ हुँदा नेपाल टेलिकमसँग भने जम्मा ७ लाख ६२ हजार ९ सय ४५ मात्र फोरजी सेवाग्राही छन् ।
नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा काठमाडौं र पोखरामा सिमित छ भने एनसेलले भने १ हजार स्थानमा आफ्नो फोरजी सेवा पुर्याएको छ । अर्को फोरजी सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमसँग भने १ लाख ७४ हजार ८ सय १६ फोरजी सेवाग्राही रहेका छन् ।
थ्रीजी सेवामा भने नेपाल टेलिकम एनसेल भन्दा अगाडि छ ।थ्रीजीसेवामा टेलिकमसँग ६८ लाख ३९ हजार ७९ सेवाग्राही छन भने एनसेलसँग ४० लाख ६६ हजार ६ सय ४५ ग्राहक मात्र छन् ।
एनसेल प्राइभेट लिमिटेड नेपाल दूरसंचार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) स्मार्ट टेलिकम प्रालि	२५ असार २०७६, बुधबार २०:१९
Previous: अमेरिकाले ह्वावेलाई उत्पादन बेच्न चाहने अमेरिकी कम्पनीहरुलाई विशेष लाइसेन्स दिने
Next: खल्तीबाटै अब डिम्याट र मेरोशेयर नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने